स्वास्थ्यकर्मीको संसार रुवाउने व्यथा : गर्भवती विदा नपाउँदा दुई जुम्ल्याहा सन्तान गुमाए – Naya Kura Daily
July 27, 2020 330
काठमाडौ । अहिले कोरोना संकटसँग लड्दै गरेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी निकै तनावमा छन् । उनीहरु विश्वभर अहिले सबैभन्दा धेरै व्यवस्तता देखिएका छन् । यो बीचमा भारत उत्तराखन्ड राज्यको देहरादुनमा दुई महिनादेखि ड्युटी गर्दै आएका एक व्यक्तिले विदा नपाउँदा दुई जुम्ल्याह सन्तान गुमाउनु परेको छ । यहाँको पन्तनगर विश्वविद्यालयका एक कर्मचारीले गर्भवती पत्नीको हेरचाह गर्न समय दिन सकेनन्, जसकारण जुम्ल्याहा बच्चाहरूको मंगलबार उनकी पत्नीको गर्भमा मृत्यु भयो । यो घटनाले सबैलाई रुवाएको छ । अरुको सेवामा लाग्दालाग्दै आफ्नो जिन्दगी उजाड भएको छ ।
यो आरोप लगाइएको छ कि ति कर्मचारीले १५ दिन अघि बिदाका लागि आवेदन दिएका थिए तर उनलाई बिदा दिइएन । विश्वविद्यालय प्रशासनमाथि संवेदनहीनताको आरोप लगाउँदै उनका साथीहरूले राति कुलपति निवास घेरा हालेका थिए । यस सम्बन्धमा कुलपतिसँग कुरा गर्ने प्रयास गरियो तर उनीसँग सम्पर्क हुन नसकेको हिन्दी अखबार अमरउजालले जानकारी दिएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण, जिल्ला प्रशासन देहरादुनले कृषि र प्रविधि विश्वविद्यालयको जीबी पन्तका छात्रावासहरू अधिग्रहण गरी क्वारेन्टाइन केन्द्रको निर्माण गरेको छ । विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरूलाई पनि यहाँ काममा लगाइएको छ। करीव दुई महिना अघि प्राचार्य सहायक अनुराग शर्माको ड्युटी सीबीएसएच कलेजमा लगाइएको थियो
यो बीचमा अनुरागकी श्रीमती गर्भवती भइन् । धेरै पहिले नै गर्भ र जुम्ल्याहा बच्चा भएको चिकित्सकले शर्मा दम्पतीलाई बताएका थिए । शर्मालाई डाक्टरहरूले १० जुलाईसम्म प्रसव हुनसक्ने भन्दै जानकारी पनि दिएका थिए । अनुरागले महामारीलाई ध्यानमा राखेर १५ दिन अघि विदाका लागि आवेदन दिए, जुन विश्वविद्यालय प्रशासनले स्वीकार गरेन् । दुबै शिशुको मंगलबार अबेर रुद्रपुरको एक निजी अस्पतालमा गर्भमा नै मृत्यु भयो । यस घटनाबारे जानकारी पाएपछि अनुरागका सहकर्मीहरूले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई उदासीनताको आरोप लगाउँदै कुलपति निवास घेरा हाल्न खोजेका थिए । अवस्था चिन्ताग्रस्त पनि बनेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
विश्वविद्यालय प्रशासन अधिकृत कर्मेन्द्र सिंहलगायत प्रहरीले शैलेन्द्र सिंहलाई जबरजस्ती क्वारेन्टाइन केन्द्रको जिम्मा लगाएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरुलाई शान्त पार्न खोजे तर कर्मचारीले कुलपतिलाई बोलाउ भन्दै अडान लिए । प्रदर्शन गर्नेहरु धेरै शैलेन्द्रसँगै काम गर्दै आएका कर्मचारीहरु धेरै थिए । अन्ततः आन्दोलनकारीहरु कुलपतिसँग वार्ता गर्न सफल भए । एक घण्टा लामो बहस पछि, कुलपति तेज प्रताप सिंहले कर्मचारीहरुलाई शान्त गर्न सफल भएका हुन् । जानकारी अनुसार पीडित परिवारलाई पाँच–छ हजार भारु दिने कुरामा आएर छलफल समाप्त भयो ।
विश्वविद्यालय सतर्कता निगरानी केन्द्रका अधिकारी प्रकाश जोशीले कुलपतिले पीडित परिवारलाई तुरून्त ५–६ हजार रुपैयाँ सहयोग दिने र मुद्दाको छानबिन पछि घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्ने बताएपछि पदर्शनकारीहरु शान्त भएका हुन् । होमोप्याथिक विभागको तर्फबाट रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउन आर्सेनिक अल्बा औषधि आईटीबीपी जवानहरूलाई वितरण गरिएको थियो । यहाँ डाक्टरहरूले कोरोना संक्रमण को रोकथाम बारे सैनिकहरु लाई जानकारी गराएका छन् । होमोप्याथिक निर्देशक डा. राजेन्द्र सिंहको नेतृत्वमा विभाग टोलीले दुई हजार आर्सेनिक अल्बा–३० औषधि आईटीबीपी जवानहरू र उनीहरूका परिवारलाई वितरण गरेको थियो ।
निर्देशकले भने,‘यो औषधि शरीरमा रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउनमा धेरै फाइदाजनक छ । धेरै गम्भीर रोगहरू पनि यसबाट निको हुन्छन् ।’ आईआईटीबीपीका डीआईजीले होमोप्याथिक विभागको तर्फबाट निःशुल्क औषधि वितरण कार्यको सराहना गरेका छन् । कमाडन्ट प्रेम लाल, सीएमओ एनएस धर्म शक्ति, पीआरओ राजीव नेगी, जिल्ला होमोप्याथिक अधिकारी डा. जेएल फिर्मल, डा. शैलेन्द्र पाण्डे, डा. विनोद शर्मा, भाजपा किसान मोर्चा उपाध्यक्ष जोगिन्दर सिंह पुंडीर आदि उपस्थित थिए । यो समाचार अमरउजालाबाट लिइएको हो । अहिलेको समयमा सान्दिर्भक लागेर हामीले भानुवाद गरेका हौँ । हरेक देशका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले अहिले एउटै खालको समस्या भोग्नु परेको छ । नेपालमा पनि यस खालका केही प्रतिनिधि घटनाहरु भएका छन् । हामीले मानवतालाई पहिलो स्थानमा राखेर हेर्नुपर्छ । जन बेली बाट
Prevसेनाको कुटाइबाट मृत्यु भएका राजकुमारको शव पोस्टमार्टम गर्न काठमाडौं पठाइयो
Nextजन्मदिने आमालाई रुवाएर सम्पत्ति सहित पत्नि लिएर भागे कृष्ण, आमा रुँदै मिडियामा
प्रधानसेनापति थापा र सेनाअध्यक्ष नरवणेबीच द्विपक्षीय वार्ता शुरु
निजी विद्यालयमा भोलिदेखि अनलाइन कक्षा बन्द, शिक्षकलाई बेतलबी विदा
आफ्नै भान्जा संग भागिन् श्रीमती सबै पैसा लिएर, यस्ता साना बच्चाको बिचल्ली (भिडियो हेर्नुस्)
भर्खरै जन्मिएको छोरालाई मार्न अमाजुले यस्तो खेल खेलीन् (3181)
डा. योगिता गौतमको विभत्स हत्या (3159)
दक्षिणकाली मन्दिरमा अप्रत्यासित घटना मन्दिरमा सबै नाग बाहिर निस्के अनिष्टको संकेत (2719)
बास्तविकता खुल्यो बिस्कुटको कार्टुनमा भेटिएको बच्चाको ? काठमाडौँमा झाडीभित्र कसले फाल्यो बच्चा(भिडियो) (2143)
जव सडकमा मास्कको अण्डरवेयर मात्र लगाएर निस्किए पुरुषतस्विर सहित (2014)
विवाह गरेको ७ दिनमै विदेशिएका श्रीमानलाई दुवईमा मृत्युदण्डको फैसला, अझै पनि उनको आशमा १७ वर्ष देखि बसेकी छन् धनिषा (1975)
धन लाभ हुनुअघि मिल्छन् यस्ता संकेत ॐ लेखी पुरा पढ्नुहोस… (1844)
असल श्रीमानको खोजीमा यि करोडपति यु’वती ! यसरी स’म्पर्क गर्नुहोस् – (1831)
कुमारी छोरीसँग बिहे गर्नेलाई साँढे ३ करोड इनाम दिने घोषणा ! (1810)
गर्लफ्रेण्ड भेट्न सिड्नी गएका नेपालीले गर्लफ्रेण्डकै साथीलाई रक्सी खुवाइ बलात्कार गरेपछि… (1721)